GEEDAHA FOR BEERTA: SIDA LOO BEERAY CHERRY SHIMBIR BEERTA - BEERTA
Dad badan, khudradda shimbiraha ayaa had iyo jeer la xiriirta bilawga guga, maxaa yeelay waa cayayaanka oo buuxiya hawada cusub ee guga, iyo sida shimbirta shimbirta, wuxuu keenaa fekero dhiirrigelin leh. Noockan noocan ah waa mid aan la qabin in la soo xulo ciidda la soo xulay, tayada, halbeegyada dabiiciga ah, iyo sidoo kale waraabinta iyo iftiinka. Taas awgeed, daryeelkiisu waa mid sahlan oo cad, natiijaduna marwalba way wanaagsan tahay.
Geedi shimbir shimbir ah, oo intaa dheer faa'iidooyinka muuqda, waxay u fasaxayaan in la nadiifiyo oo la daadiyo ciidda ku yaal gadaal ama xagaaga xagaaga, taas oo ah sababta beeralayda badan oo doonaya inay ogaadaan sida loo koro cherry shimbir iyo daryeel. Uma baahna xirfado khaas ah iyo wakhti badan - raac xeerarka iyo talooyinka lagu soo bandhigay hoos.
Shimbir shimbir: sharaxaad
Marka ugu horeysa ee ku saabsan cherry shimbir taariikhda dib u soo celiyo wakhtiyadii hore ee Giriigga hore Theophrastus. Geedka shimbirta ah waxaa loo yaqaanaa meel ka baxsan gobolka. Tusaale ahaan, Afrika, Aasiya iyo Yurub, waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah dhirta ugu quruxda badan, oo ku haboon goobaha qurxinta. Dhammaan noocyada shimbirta shimbirta ah waa geedo qallafsan (dhar aan caadi ahayn) ee qoyska Pink. Cherry Bird waa dalag dalagyo miraha ah. Kow iyo toban nooc oo hilib shimbir ah ayaa si weyn ugu fiday gobolka.
Ma taqaanaa? Geedka Tani waxay heshay magaceeda sababo la xiriira xaqiiqda ah ka dib markii ay cunaan berry ee afka qofka, waxaa weli jira patina-madow.
Geedku wuxuu bilaabmaa inuu si firfircoon u barbar dhigo bilaha Abriil-Maajo, isaga oo dillaacaya cad cad oo cadaan ah. Florescences iyo miraha shimbir shimbir waxay ku kala duwan yihiin qiyaas yar, laakiin isla mar ahaantaana waxay yihiin nafaqo aad u nafaqo leh waxayna ku sumoobeen xayndaabka sonkorta iyo glycosides. Geedka boodhka shimbiruhu wuxuu ka buuxsamaa guryaha waxtarka leh iyo walxaha, taas oo ay ugu badan tahay in lagu isticmaalo daawada iyo qurxinta shaxanka hal qaab ama mid kale.
Ma taqaanaa? Qeybaha caalamka ee dhirta waxaa loola jeedaa cherry in cirridka Plum. Iyo awoodda ay u leeyihiin inay u istaagaan xaaladaha cimilada adag iyo dhirbaaxada dheeraadka ah ee shimbirta shimbirta ah waxaa loo yaqaan "Siberian Plum" oo dhan.
Maxay muhiim u tahay meesha cherry shimbiruhu korayo.. Geedka Tani waxay jecel yihiin qoyaan joogto ah. Daaqada waxaad la kulmi kartaa cherry shimbir ah aagga diirran. Waxay ku koraan kaymaha cufan, meelaha qoyan ama xuduudaha webiyada. Waxaa xusuus mudan in xaaladaha daryeelka saxda ah iyo beeritaanka habboon, cherry shimbiraha lagu beeray karaa meel kasta oo dacha iyo aagga dambe ee waddankeena.
Cherry shimbir waa baadiyaha ama geed taas oo gaari karta dhererka ilaa 10-15 mitir. Dhexdhexaadiyaha taajka shimbirta shimbirta ayaa gaari kara 5-7 mitir. Warshad Tani waa mid aan qabyo ahayn, taas oo u ogolaaneysa in ay koraan on kasta oo ciid ah, iyada oo aan loo eegin ka kooban iyo heerka of acidity ah. Mararka qaarkood, cherry shimbir ayaa laga heli karaa ciidda ciidda.
Geedku wuxuu leeyahay nidaam xidid leh, oo si dhakhso ah u koraya. Waxaa mahad leh guryahaas Dadku waxay badanaa ku beeraan geedo cherry shimbiraha ah si ay u abuuraan debuun dabiiciga ah ee dhul u dhow guriga. Waxaa intaa dheer, cherry shimbir inuu awood u leeyahay inuu horumariyo ciidda, iyo caleenta dhicin - si loo yareeyo acidity iyo kordhiyaan dhalidda ee dhulka.
Doorashada meel loogu beerayo cherry shimbir
Doorashada goob loogu talagalay beeritaanka shimbir shimbir ah iyada oo aan la buunbuunin waxaa loo tixgelin karaa mid ka mid ah marxaladaha ugu muhiimsan, taas oo saadaalisay natiijada koritaanka dheeraad ah ee geedka. Taasi waa sababta aad si taxadar leh u raacdo talooyinka ku saleysan doorashooyinka cherry shimbiraha ee la xiriirta tayada cagaaran iyo tan ciidda.
Waa immisa khudaarta shimbirta u baahan tahay iftiinka qorraxda
Iyadoo loo eegayo xajmiga weyn ee cherry shimbir, koritaanka habboon iyo nafaqo ku filan waa inay helaan qadar ballaadhan oo qorrax ah.
Sidaa daraadeed, geedka geedi dooro doorashooyin wanaagsan oo iftiin leh.
Waa muhiim! Sida caadiga ah, geedo yar yar shimbir yar ayaa u adkaysta, taas oo u oggolaanaysa inay u adkeystaan ​​iftiinka shucaaca ku-meel-gaarka ah.
Waa maxay ciidda jecel cherry shimbir
Warshad Tani waa wax aan qabyo ahayn oo si joogta ah u adkeysta beerashada ciidda ee tayada hoose, xitaa inkasta oo aysiidhka guud. Si kastaba ha ahaatee Cherry shimbir ayaa koraa oo si dhakhso ah u koraa oo ah xawaare nafaqo leh oo nafaqo leh, oo leh heer dhexdhexaad ah oo qoyaan. Si arrintan loo sameeyo, ka hor inta aan la beeriin waxay ku habboon tahay daawaynta carrada, iyo ka dib markaad degto, hubi inaad waraabiyo si joogto ah.
Astaamaha aasaasida cherry shimbir beerta beerta
Awood la'aanta shimbirta shimbirta ah ee daryeelka iyo geedi-socodka beerashada ayaa si weyn u soo jiidata dadka, laakiin natiijada ugu dambeysa waxaa lagu go'aamiyaa marxaladda beerashada. Khaladaadka iyo khaladka aan fiicneyn waxay noqon kartaa waxyeello udhaxeeya seedling. Si si habboon u beeraan cherry shimbir guga guga, waxaa si xoog leh lagula talinayaa in la raaco talooyinka sahlan ee laakiin talooyin wax ku ool ah inta lagu jiro marxaladaha ugu muhiimsan ee diyaargarowga iyo kala-guurka.
Sida loo diyaariyo dalool dalag dhuleed
Diyaarinta godadka cawsku wuxuu ku dhacaa dhowr marxaladood. Baaxaddiisu waa inay ahaataa ugu yaraan 50 × 50 × 50 sentimitir.
Tani waxay sabab u tahay koritaanka degdegga ah ee nidaamka xididka geedka, ciidda agagaarka ah ee waa in la bacrimiyo loosen, taas oo lagu sameeyo habka diyaarinta. Boorka godka ayaa si badan u waraabiyey, ka dibna taas waa in lagu dhajiyaa amarka soo socda: dhulka dabacsan (5-7 cm), sida balka (3-5 cm), dhulka dabacsan (15-20 cm). Ka dib markii lakab kasta oo xiga, waa in lagu daro qaar ka mid ah biyaha ceelka, laga yaabee xitaa xalalka nafaqo, Bacriminta.
Tiknoolajiyada iyo qorshaynta beeritaanka shimbir shimbir beerta beerta
Tiknoolijiyada iyo qorsheynta beeritaanka cherry shimbir ayaa aad u fudud waxayna ka kooban tahay waxoogaa daawooyin ah.
Ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad si habboon u diyaariso godadka dhulka, ka hortaga ciidka soo galaya, maadaama maadada shimbirku ay si xun u koraan carrada ciidda. Intaa waxaa dheer, degaanka degaanka waa in si fiican iftiin maalintii, si ay sapling helo iftiin ku filan. Masaafada u dhexaysa dhirta waa inay ahaataa ugu yaraan 2 mitir oo ah raadiye.
Gooyn la beeray oo ku qulqulay godadka diyaargarowga si qoto dheer ah 20-30 cm iyo si siman dhammaan dhinacyada buuxa ee ciidda dabacsan.
Mid kasta oo 10-15 cm ah carrada bulk ayaa lagu daadi karaa balka iyo biyo badan. Ka dib markaa, godadka waa in si taxadar leh loo dhigo.
Waxaa lagama maarmaan ah in la sii wado qashinka beerta ilaa ay ka buuxaan xoojinta shimbirta shimbirta ee shimbirta iyo dhismaha buurta yaryar, taas oo mar dambe lagu daadin karo oo la mulched leh balka leh peat.
Noocyada beerista ee cherry shimbir, sida loo daryeelo warshadda
Beerista shimbirta shimbirta waa mid fudud oo toos ah, iyo, si siman oo muhiim ah, uma baahna waqti badan.
Si aad u hesho natiijada la rabay iyo beeritaanka degdegga ah ee geedka, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo maaha kali-beelaha gobolka iyo goobta degaanka, laakiin sidoo kale talooyin ku saabsan daryeelka shimbirta oo dhan.
Sida loo waraabiyo dhirta
Waraabinta waa in la sameeyaa iyadoo la raacayo xididka geedka, oo ka qaybqaata laba jeer bishii ilaa 20-30 litir oo biyo ah geedka kasta.
Xilliga cimilada ugu caansan, waxaa kale oo suurtogal ah in lagu daro caleemaha geedaha biyo nadiif ah, taas oo ka ilaalinaysa qalajinta. Iyada oo ku xiran cimilada iyo heerkulka, waxaa loo oggol yahay in la kordhiyo ama la yareeyo mugga waraabka iyadoon isbeddelaynin soo noqnoqoshadooda.
Xeerarka quudinta Cherry
Buunshaha, beeritaanka iyo daryeelka kuwaas oo dhif ah dhibaatooyin keena, mararka qaarkoodna waxay u baahan yihiin quudinta. Qoryaha bacriminta muhiim maaha, laakiin weli waxay ka caawisaa ka hortagga cudurrada shimbir shimbirta ah iyo sii wado noloshooda, sidaas darteed bannaanka ugu badan oo kufilmaamaya bacarimiso.
Waxaa xusuus mudan macdanta iyo macdanta organic waa ku habboon yihiin cherry shimbir. Waxaad samayn kartaa guga iyo dayrta, laakiin waa lagama maarmaan in la tixgeliyo xilliga xilli-ciyaareedka. Sidaas, guga waxaa ka wanaagsan inaad isticmaasho sharoobada ama HOL, iyo in superphosphate dayrta iyo cusbo potassium.
Baahida ugu sareysa ee loo baahan yahay in si toos ah hoos loo dhigo asal ahaan, ka hortagga bacriminta caleemaha iyo dhalinyarada baxsada. Fiirinta iyo mugga bacarinimadu waa in ay tixgelisaa da'da iyo baaxada geedka, iyo sidoo kale diirada walaxda. Marka la eego arrintan, waa inaad shuruud la'aan ku raacdaa talooyinka ku saabsan baakada bacriminta.
Waa muhiim! Wixii quudin wax ku ool ah 3-4 maalmood ee ugu horreeya ka dib marka labka iyo dheddig-qaadashada waa inay iska ilaaliyaan inaad ku shubtaan cherry shimbir.
Daryeelka carrada ee cherry shimbirku korayo waa mid cad oo ku habboon geedaha kale. Sidaa daraadeed, ugu horreyntii waa lagama maarmaan in la kormeero haramaha, iyaga oo waqtigooda ka saaraya. Waxaa lagama maarmaan ah in la dabciyo dhulka 1-2 jeer xilli ciyaareed kasta, ka hortagga dildilaaca iyo si joogto ah ugu haynta qoyaanka.
Manjada cherry shimbir
Iyada oo la socota waraabin joogto ah iyo quudinta waqtigeeda, cherry shimbir, daryeelka guga ee taas oo loo yareeyo ugu yaraan, mararka qaarkood u baahan tahay manjooyin. Gawaadhida cherry shimbiraha guga iyo dayrta waxaa la fuliyaa ka dib baaritaan muuqaal ah oo geedka oo loogu talagalay jiritaanka xanuunada, cudurada iyo goobaha cayayaanka. Xannuun iyo laan waxyeello ah, iyo sidoo kale koritaanka aan loo baahnayn, hubaal ayaa laga saari doonaa.
Doorasho gooni ah ayaa sameeya qaab-dhismeed. Waxaa jira laba siyaabood oo loo sameyndoono: qaab ah geedo badan oo isku dhafan iyo geed ku yaala jir sare. Si aad u abuurto baadiyaha, waxaad u baahan tahay inaad jarjartid heerka koowaad ee dhererka qiyaastii 70-80 cm Ka dib marka caleemaha kowaad soo baxaan, kaliya kuwa ugu horumarsan ayaa laga tegayaa. Waxaa xusuus ah in aragti dheeraad ah soo jiidasho leh, waa in ay ka tagaan laamaha si isku mid ah si ay midba midka kale. Si la mid ah, oo leh mudo ah lix bilood ama sanad, heerarka labaad iyo saddexaad ayaa la sameeyay.
Kala soocida xabo sare waxaa loo sameeyaa iyada oo la raacayo mabda'a isku mid ah, laakiin kiiskan waa laamaha hoose iyo caleemaha hoose. Waxaa muhiim ah in la ogaado in cherry shimbir laamood ee dayrta iyo guga waa in la soo afjaro daaweynta saxan log oo leh beerta beerta.
Sida loo faafiyo cherry shimbirta beerta
Si aad u hesho natiijo la aqbali karo iyo kobcin dheeraad ah ee geedkan, waa inaad ogaatid oo aad fahamtaa sida qashinka shimbirku dib u soo saaro.
Cherry shimbir shimbir ayaa suurtogal ah siyaabo badan oo suuragal ah: abuur ama daaqsinka (gooynta, dharbaaxada, farcankiisa, uurjiif). Mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa si fiican u cadeeyay loona muujiyey waxtarka sare.
Faafinta by abuurka ayaa si firfircoon loo isticmaalaa noocyada shimbir shimbir. Xaaladdan oo kale, miraha waa la gooyay, si taxadar leh u muujinaya midhaha bislaaday ee cherry shimbir, ka dibna lagu qasi jiray ciid qallalan oo lagu kaydiyaa meel qabow. Abuurka beeray waxaa lagu beeray xilliga dayrta ama horraanta gu'ga ee ciidda qoyan ee qoyan. Qoto dheer ee beeridda 1-3 cm, iyada oo ku xidhan xayawaanka ciidda.
Waa in la ogaadaa in miraha beeritaanka guga ay tahay inay noqdaan kuwo horay loo qorsheeyay.
Waa muhiim! Naqshadda abuurka waxay si weyn u kordhinaysaa iska-caabbinta xaaladaha cimilada iyo cudurrada adag, iyo sidoo kale si weyn u kordhiyaan fursadda biqilka. Mid ka mid ah waa in aan la dayicin of stratification, maxaa yeelay waa hubaal taas oo go'aamisa guusha beeritaanka guga ee abuurka cherry madow.
Dhismuhu waa in la sameeyaa 3-4 bilood oo ah peat qoyan, dhoobo, ciid ama isku dar ah iyaga oo heerkul ah 0 ilaa +5 ° S. Inta lagu jiro waqtiga oo dhan substrate waa in lagu hayaa qoyan. Daryeelka geedo waa mid fudud oo ka kooban biyo waraabin ah, ka qaadista haramaha iyo khafiifinta ilaa masaafo 5-10 cm Muddada muddada dhirta, dhirta ayaa leh waqti ay ku gaadho 40-50 cm oo dherer ah, kadibna waxaa lagu beeray dhul furan oo meel joogto ah.
Gerriga miraha varietal, waxay inta badan ku dalbadaan gaysashada isha (fuliyay qeybtii labaad ee July) iyo kobcinta wanaajiyey (inta lagu guda jiro gu'ga), halka isticmaalka geedo cherry shimbir caadi ah sida stock ah.
Ma taqaanaa? Khubarada iyo bannaanka u khibrad badan ayaa isticmaala caleemaha cherry shimbirta ah si ay bacrimiyaan ciidda iyaga oo u gaar ah. Qaadashada ciidda iyo caleemaha cayayaanka ayaa caawinaya yaraynta sunta iyo kordhinta wax soo saarka.
Cherry shimbir waa in la beeraa marka cimiladu u ogolaato inuu ku soo dejiyo - sida ugu dhakhsaha badan heerkulka xasilloon (10 ° C ka sarreeya) iyo heer qoyaan joogto ah ayaa la dejiyaa. Guga, ugu saxsan yahay waa beeritaanka cherry shimbir ee May. Isla mar ahaantaana, waxaa muhiim ah in godadka diyaargarowgu uu noqon doono qiyaasta ku filan si loo daboolo nidaamka asaasiga ah ee geedka iyada oo aan la jebin iyo jeexitaankiisa. Si loo hagaajiyo koritaanka, ka hor inta aan laga beeri cherry shimbir, macdanta iyo macdanta organic waxaa lagu dabaqi karaa ciidda ceelka, laakiin aan ka badnayn 20-30 g mid kasta.
Waa muhiim! Nidaamka asaasiga ah ee cherry shimbiraha nuugo walxaha ka soo ciidda si deg deg ah si degdeg ah, sidaas bacriminta xad-dhaaf ah noqon kara khatar. Muhiim ma aha in lagu quudiyo geed aan loo baahnayn marxaladaha hore.
Masaafada u dhexaysa geedo cherry ah ayaa lagu go'aamiyaa noocyada kala duwan ee shakhsiyaadka, si kastaba ha ahaatee, sida caadiga ah, waa in aysan ka yarayn 3-4 mitir. Ka hor intaan la beeri, taajkii geedku waa in la googooyaa ilaa 65-75 cm Intii lagu guda jiray geedi socodka, nidaamka xididku wuxuu ka buuxsamaa ciidda dabacsan iyo, haddii ay jirto, balka. Wakhti ahaan, foosto waa in la ruxaa, iyo dhulka ku wareegsan si tartiib ah ayuu u riixay. Gebogebadii, cherry shimbir waa in si badan loo waraabiyo, iyo mulch waa in la mulched leh isku dar ah oo ah peat iyo sida balka.
Bird-cherry waa warshad aad u qarsoodi ah oo adkeysa dhammaan dhibaatooyinka iyo xaaladaha cimilada ee cimilada ee gobolka. Taas marka la eego, kiisaska shimbir shimbireed ama dhaawaca cayayaanka ayaa si dhif ah loo diiwaangeliyaa. Si kastaba ha ahaatee, xitaa inkastoo tani, khubarada ayaa tilmaamaya noocyada ugu waaweyn ee cayayaanka iyo cudurada saameyn kara dhirtaas.
Waxaa ka mid ah cudurada ugu muhiimsan ee cherry shiman waxaa ka mid ah caleen caleen iyo cudurada miro, taas oo ay sababeen marsupials.
Xaaladda cudurka a geedka, dhammaan meelaha ay saameeyeen geedka waa in isla markiiba laga saaro, iyo qodobbada gooyaa waa in lagu daaweeyaa garoonka beerta.
Cayayaanka ugu caansan waxaa ka mid ah boobs, silkworm, cayayaanka weevil, aphids iyo cayayaanka kale. Si loola dagaallamo xilliga gu'ga hore waxaa lagama maarmaan ah in lagu daaweeyo cherry shimbiraha leh qashinka xoogga leh ee tubaakada ama biyaha saabuunta ah. Dhamaadka geedi socodka ubax ee dhirta, soo celinta wax soo saarka
Si loo wanaajiyo ubax, waxaa lagu talinayaa in lagu buufiyo dhirta iyada oo xal loo diyaariyo qaybta dabiiciga ah "Decis" ama "Sherpa".
Waa muhiim! Waxay ka timaadaa habka habboon ee habboon ee cherry shimbir ka soo cayayaanka iyo cudurada taas intee le'eg ee shimbir beerta ku nool. Marka la eego arrintan, waxaa muhiim ah in la sameeyo kormeer muuqaal ah ee warshadda ugu yaraan hal mar xilli.
Cherry Bird ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay xul wanaagsan oo loogu talagalay inuu soo dego boggiisa. Iyada oo la dhigo qaar ka mid ah guryaha hantida leh, dhirta sidoo kale waxay leedahay muuqaal wacan. Waxaa intaa dheer, cherry shimbir, beerashada iyo daryeelka ee aan u baahan tahay dhib badan, waxaa lagu beeray karaa ciidda, ennobling iyo bacarimiso.